Faysal Cali-waraabe Oo Si Cilmiyeysan Uga Jawaabay Su’aalo Reer Boorama Ka Weydiiyeen Tabashooyin Ay Ka Tirsanayaan Ururkii SNM | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Faysal Cali-waraabe Oo Si Cilmiyeysan Uga Jawaabay Su’aalo Reer Boorama Ka Weydiiyeen Tabashooyin Ay Ka Tirsanayaan Ururkii SNM
“Asxaabtiiba waa kuwii is dilay, ehelkula reer Boorama-mow way is dilaane faylashaas ha inagu soo faqfaqina, dadkii dhintayna ilaahay ha u naxariisto…”Faysal Cali-waraabe
Hargeysa:(Hubaal)-Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali-waraabe, ayaa jawaab cad ka bixiyey su’aalo laga weydiiyey waxyeellooyin loo tirinayo ururkii hubaysnaa ee SNM oo ay sheeganayaan shacabka ku dhaqan gobolka Awdal, waqtiyadii lagu jirey dib u xorayntii Jamhuuriyadda Somaliland.
Guddoomiye Faysal oo isaga oo ku sugan magaalada Boorama su’aalo uga jawaabayey ardayda Jaamacadda Cammuud, ayaa meesha ka saaray inuu ururkii SNM wax colaad ah oo dheeraad ah u hayey gobollada galbeedka dalka, waxana uu sheegay dhib kasta oo waqtigaas dhacay uu salka ku hayey colaado uu taliskii Siyaad Barre umadda dhexdeeda isu geliyey.
Faysal Cali-waraabe waxa uu sheegay inuu taliskaas lala dagaallamayey qori dab leh isugu dhiibay bulshooyinka walaalaha ee ku nool Somaliland, taasina aanay ahayn wax SNM loo nisbayn karo, waxana uu yidhi, “Anigu reer Hargeysa Ayaan ahay, laakiin dagaalkii Maxamed Siyaad Barre lala galay, beesha Ceerigaabo, Sanaag iyo Sool degta ee taageeri jirey SNM-ta iyo dadka dega galbeedka ee SNM taageeri jirey, ayaa la isku diray oo ay dawladdaasi hubka isugu dhiibtay.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu bulshada reer Boorama hogo-tusaaleeyey beelo deris ahaa waqtigii dagaalka lagu jirey oo uu talisku dhexdooda colaad xun ka abuuray, kuwaas oo galbeedka dalka ku noolaa, “Tusaale ahaan waqtigaas reer Xareed iyo Reer Nuur-ku ismay bixinayn, waana dadka dad isugu xiga, khasaarena wuu dhacay, laakiin 1991-kii waxaynu ku heshiinay inaynu isa saamaxno, weynu isa saamaxnay,” ayuu yidhi Faysal Cali-waraabe.
Waxa uu ugu dambayn Faysal Cali-waraabe sheegay in dhammaanba bulshada ku dhaqan Somaliland ay iska saamaxday dhib kasta oo dhexdooda timi waqtigii dalka la xoraynayey, isla markaana cabashada Boorama kamid tahay waxyaabahaas la iska saamaxay, waxana uu yidhi, “Asxaabtiiba waa kuwii is dilay, ehelkula reer Boorama-mow way is dilaane faylashaas ha inagu soo faqfaqina, dadkii dhintayna ilaahay ha u naxariisto.”